कस्तो छ "लूट २"? -समीक्षा | Hamro Patro
"लूट २" समीक्षा अडियो
यो साता मल्टीस्टारर "लूट २" देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको छ । २०१२ मा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र "लुट"ले नेपाली चलचित्र जगतमा एउटा यस्तो हुरी ल्यायो जुन सम्पूर्ण चलचित्रप्रेमीले बिर्सन सक्दैनन् । त्यसबेला लुट प्रदर्शनमा आउनुअघिका थुप्रै चलचित्रहरुले दर्शकको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका थिएनन् , त्यस्तो बेलामा निश्चल बस्नेतको डेब्यु फिल्म तहल्का बनेर आयो र नेपाली चलचित्रहरु प्रति फेरि दर्शकलार्इ सकारात्मक रहन बाध्य बनाइदियो । आज लगभग ५ वर्षपछि निश्चल बस्नेतको लुट २ रिलिज भएको छ । आउनुहोस जानौ दर्शकहरुलाई कस्तो लाग्न सक्छ चलचित्र लूट २ । हाम्रो पात्रोको समीक्षामा ।
चलचित्र लूट २ को कथा फेरी एकपटक एउटा ठुलो लूट कै वरिपरी घुमेको छ । निर्देशक बस्नेतले नै लेखेको चलचित्रको कथालार्इ उनले एउटा पर्फेक्ट सीक्वल बनाउने क्रममा निक्कै नै सतर्क रही उही पात्रको कथालार्इ मात्र अगाडी बढाएका छन् । चलचित्रको पटकथा पनि राम्रो छ , खासगरी दोस्रो हाफ निक्कै नै इंगेजिंग छ । पहिलो हाफमा पात्रहरुको स्थापना गराउने दृश्यहरु अलि फिक्का भने अवस्य लाग्दछ । तर अन्तसम्म आइपुग्दा चलचित्र रोचक बन्न पुग्दछ । कुरा गरौ चलचित्रको संवादहरुको , निर्देशक बस्नेतले निर्देशन गरेको लूटको संवादहरु त्यस चलचित्रको अव्वल पक्ष थियो । तर बस्नेतले यो चलचित्रमा आफ्नो संवादहरुमै थोरै भट्किएको हामीलाई महसुस भयो । लूटका जति प्रभावशालि संवाद सायदै सुन्न पाइन्छ उल्टै संवादकै कारण थुप्रै सिनहरु जरुरत भन्दा धेरै लामो लाग्दछन् । संवादको ओभरडोज चलचित्रको मुख्य खोट देखिन्छ। निश्चलका संवादहरुले बेला बेलामा दर्शक हसाउन भने छाडदैनन् ।
चलचित्र लूट त्यहाँ भएका सबै कलाकारहरुका लागि एउटा करियर टर्निंग पोइन्ट थियो , लूट २ मा पनि सबैले आफ्नो उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स दिएका छन् । मास्टर माइन्ड सौगात मल्ल अर्थात हाकु कालेले यो चलचित्रबाट भने पहिला जस्तो लोकप्रीयता नपाउन सक्छन , तैपनि उनले ठाउँ ठाउँमा प्रभाव भने अवस्य छोडछन् । गोफ्लेको भूमिकामा दयाहांग राईको जति तरिफ गरेपनि कम लाग्दछ , उनले दर्शक हसाउन छाड्दैनन , खासगरी उनको र सुन्दरी बीचका दृश्यहरु निक्कै रमाइला छन् । कर्मले कथा अनुसार चाहिने रिस स्क्रिनमा उत्कृष रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतीक राज न्योपाने राम्रो छन् र सुशील राज पाण्डे पनि ठिक ठाक छन् । त्यसबाहेक चलचित्रमा प्रवीन खातिवड़ा, बिपिन कार्की र रामेश्वोर चौरसियाले बाकी कलाकारलार्इ उत्कृष्ट सपोर्ट प्रदान गरेका छन् । चलचित्रमा सुन्दरीको भूमिकामा देखा पर्ने अलिशा राईले इम्प्रेस गर्दछिन । सिर्जना सुब्बा उत्कृष्ट छिन तर कथाले ऋचा शर्मालार्इ भने खासै ठाउँ दिएको छैन उनको काम ठिक ठाक छ ।
काली प्रसाद बास्कोटाको ठमेल बजार लूट २ को आकर्षण नै हो । नृत्यमा अलिशा राई सबैको मनमा छाई नै सकिन , नृत्य निर्देशक बिक्रम स्वरलार्इ फुल मार्क। घ्याम्पे गीत नि राम्रो छ र हर्कुलसको संगीत र रेनिषाको कोरीयोग्राफी तारिफयोग्य छ , त्यसबाहेक चलचित्रमा ब्याक्ग्राउँन्डमा केही गीत बज्छन र ति गीतहरुले प्रभाव पार्दैनन् ।
पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन पक्कै पनि सधै झैँ उत्कृष्ट नै छ , यो चलचित्रमा पनि उनको प्रभाव देखिन्छ । सुरेन्द्र पौड्यालको एडिटिंग भने यसपटक निकै फितलो छ , चलचित्रमा कैची चलाउन पर्ने धेरै ठाउँ छ तर किन एडिटर चुके बुझ्न सकिन्न । थुप्रै दृश्यहरु अलिकति लामो भएको अनुभव हुन्छ । लूट २ लार्इ फास्ट पेस थ्रिलर बनाउन चुकेका छन् सुरेन्द्र पौड्याल।. राज कुमार उप्रेतीको फाइटहरु गज्जब का छन् । त्यसबाहेक रोहित शाक्य र शैलेश श्रेष्ठको ब्यक्ग्राउन्ड स्कोर पनि दोस्रो हाफमा उल्लेखनीय छ ।
निर्देशक निश्चल बस्नेतले जुनै काम गरेपनि उनीमाथि थुप्रै दवाव रहन्छ , कारण उनीबाट दर्शकहरुलाई अपेक्षा बढी नै हुने गर्दछ । लूट २ लार्इ न्याय दिन पक्कै पनि उनलाई धेरै मेहेनत लाग्यो , र उनले धेरै हद सम्म चलचित्रलार्इ न्याय दिएका पनि छन् , हरेक दृश्य चाहिने भन्दा लामो हुनु पक्कै पनि कमजोरी हो , तर उनले एउटा इन्गेजिंग चलचित्र दर्शक अघि पस्केका छन् । उनको स्मार्ट निर्देशन दोस्रो हाफमा छ जब थुप्रै दर्शकले कथा अनुमान गरिसक्दा पनि चलचित्र बाट ध्यान भट्काउन भने सक्दैनन् । थोरै कमि कमजोरी सुधारेको भए चलचित्र भए भन्दा निक्कै अव्वल बन्ने थियो ।
लूट २ पैसा वसूल चलचित्र बनेको छ , दर्शकहरुले यो चलचित्रलार्इ लूट संग तुलना गर्नु स्वाभाविक नै हो । सुरुको ४५ मिनेट अलि फिक्का लाग्दछ भने फिल्म त्यसपछी दर्शकहरुको ध्यान बाधेर हिडेको छ । चलचित्रले थुप्रै ठाउँमा हसाउछ र थुप्रै यस्ता सिन पनि छन् जहाँ हल भित्र तालीको बर्सात हुनेछ ।